Shiinaha Dibadda Ragga jaakada daboolka aan xirfad lahayn warshad tayo sare leh iyo soosaarayaasha | Ruisheng
Ragga dibadda ah jaakad dabacsan oo aan xirfad lahayn oo tayo sare leh
Xitaa markaad u maleyneyso in lakabyadu ay sax yihiin, mararka qaarkood dabayshu waxay ka dhigi kartaa mid aad u qabow. Haddii aad ku jirtid buuro dabayl ah oo dalka ka mid ah, ama aad eeygaaga guriga uga baxdid, waxaan ka faa'iidaysan karnaa qalabka dab-damiska ee ragga, oo naga caawiya sidii aan u kululaan lahayn oo aan u qalajin lahayn. Waxaan bixinaa tiro fara badan oo ah dabeylaha ugu dambeeya ee ragga iyo jaakadaha loogu talagalay inay ku xirnaadaan diirimaad oo ay dabeyshu u daciifaan.
Goobta Asalka: Jiangsu, Magaca Magaca Shiinaha: OEM
Nambarka Qaabka: Ski jaakada Logo: Aqbal Astaanta Macaamiisha OEM
Cabbir ： Cabbir kasta waa la heli karaa Midabbada: Midabbada la Dalbaday
Fasalka: Fasalka A Qalabka: Polyester / Customization, Waxyaabaha la codsaday
Kooxda Da'da: Dadka Qaangaarka ah Qaabka: Jaakadaha, jaakadda haweenka ee dabaysha
Feature: Anti-UV, Neefsasho, DEG DEG Qallalan, Waxqabadka Dabayl la'aanta: biyuhu, dabaysha
Qiimo Jaban: Tiro Weyn Wadahadal Ah
1 ， Waa qafiif iyo miisaanka yar, taas oo macnaheedu yahay inaad u qaadan karto alaab deg deg ah markaad u safrayso deegaan qoyan - waxay ku qarsoon tahay jeebkaaga bidix, sidaa darteed si fudud ayaad ugu dari kartaa xirmada.
2 details Faahfaahinta naqshadeynta faa iidada leh waxaa ka mid ah koofiyad la habeyn karo, koofiyad is waafajinaysa oo leh laab laab laab, dhamaan jeebka laabta iyo dabaysha gudaha.
3 ， Dharka laftiisu wuxuu si wax ku ool u noqon karaa dabayl wuxuuna leeyahay qaab naqshad xoog leh. Dabacsan jilicsanaanta iyo gogosha, jeebka dharka lagu dhaqo, laba xirmooyin mesh, jeebado gacanta lagu jeexjeexay (hawo hawo) iyo xirmooyin fudud oo si adag loo adkeyn karo. Xadhiggu sidoo kale aad ayuu ugu fiican yahay koronto waxaana lagu hagaajiyay koodhka
1.Macmiilkeena waxaa kujira sumado badan oo caalami ah. Qaarkood waxay xiriir nala leeyihiin 5-8 sano.
2.Waxaan leenahay 2 Kooxda iibka: Dharka, dharka. Iib kasta wuxuu leeyahay 8 sano oo khibrad shaqo ah. Waxaan ku siin karnaa adeegga Hal-Stop dhammaan badeecooyinka. Wada shaqaynta Kooxda Wanaagsan waxay dammaanad ka qaadi kartaa in looga jawaabo dhammaan noocyada weydiimaha 2 saacadood gudahood. Dhaqankayaga iibku waa horumar iyo wada shaqeyn.
Waxaan si adag gacanta ugu haynaa maareynta silsiladda sahayda. Waxaan leenahay warshad gaar ah, oo 2-3 saac u jirta lianyungang. Waxaan abaabulnaa dhar / shey, tusaale ahaan waxaan ka xakameyneynaa yarn ilaa midab ilaa maraq ah; Waxaan ka helnaa wadarta adeegga naqshadeynta / farshaxanka, noocyada ugu horreeya, nooca ugu dambeeya, muunadda PP, wax soo saar ballaaran, illaa kormeerka shixnadaha ka hor.
Hore: ragga Yoga Dharka Caloosha Xakamaynta Tababbarka Sare ee Yoga Leggings
Xiga: Jaakadaha diiran Jaakadaha Fleyce waxay taageeraan iibsiyada badan
Soo Baadh Jaakadaha Dahabka ah ee Mens-ga ugu fiican ee S ...
Raga tayada sare leh ee ragga SoftshellJacket Bannaanka
Custom Jiilaalka Down Jacket Ragga Puff Tayada Sare ...
Jaakadaha diiran Jaakadaha Fleece waxay taageeraan iibsiyada badan